Ny tontolon'ny culinary
Bilaogy ho an'izay te hahandro matsiro
Mandra-pahoviana ny hamony 4 kilao vao mahandro?
Mandra-pahoviana no mahandro ham tsy misy taolana 4lb? Apetraho ao anaty lovia fanaova misy rano 1/2 kaopy. Sarony amin'ny aluminium foil. Alefaso amin'ny 325 ° F mandritra ny 20 ka hatramin'ny 30 minitra eo ho eo isaky ny kilao mandra-pahafana. Arosoy ny hem izao na atao glasy toy izao manaraka izao: Esory ny foil amin'ny ham. Ahoana no mahandro sakafo 4.4 kilao…
Sokajy Ilaina hafa
Ahoana no ahazoanao antoka fa masaka ny bacon?
Tsy maninona raha tsy masaka ny bacon? Bacon mahandro mba ho azo antoka haingana. Raha vao manjavozavo dia azo hanina. Ny bacon manta dia tena ambany noho ny risika, raha toa ka sitrana tsara. Na dia tsy masaka aza ilay izy, dia azo inoana fa tsy hanimba ianao. Efa masaka ve ny bacon avy amin'ny fivarotana? Noho izany…
Afaka mahandro boerewors amin'ny mangatsiaka ve ianao?
Inona no fomba tsara indrindra mahandro boerewors? Mampiasà menaka oliva iray sotro ao anaty lafaoro ary avelao ny boerewors ho masaka amin'ny afo kely. Ny afo kely dia hamela ny boerewors ho masaka mitovitovy amin'ny lokony tsirairay. Tokony ho 10 minitra eo ho eo isaky ny lafiny iray dia ampy ho 20 minitra. Ahoana no …
Fanontaniana: Iza no legioma masaka salama kokoa?
Tsara kokoa ve ny mihinana legioma manta sa masaka? Ny fihinanana legioma manta dia manome ny vatanao ny haavon'ny folate tsara indrindra sy ny otrikaina mety levona anaty rano toy ny vitamin C. … Kanefa ny otrikaina ao amin'ny anana masaka dia mora levonina sy horaisina. Ny fibra malefaka amin'ny legioma masaka dia mitondra amin'ny famoahana vitaminina E ...
Ahoana ny fiovan'ny legioma rehefa masaka?
Ahoana no fiovan'ny legioma rehefa masaka? Ahoana no manova ny legioma? Ny fandrahoan-tsakafo anana dia manimba ny rindrin'ny selan'ny zavamaniry, ka mamoaka bebe kokoa ny otrikaina mifatotra amin'ireo rindrin'ny sela ireo. Ny legioma masaka dia manome antioxidants betsaka kokoa, ao anatin'izany ny beta-carotene, lutein ary lycopene, noho izy ireo rehefa manta. Ny legioma masaka koa dia manome mineraly bebe kokoa. Very otrikaina ve ny legioma...
Nanontany ianao hoe: Ahoana no mahandro Soedoà voatetika ao anaty microwave?
Mandra-pahoviana ny soedoà mahandro ao anaty microwave? Apetraho ao anaty lafaoro microwave ny soedoa manontolo. Apetraho amin'ny avo ny dial ary apetraho amin'ny microwave mandritra ny 20 minitra. Mandra-pahoviana no mahandro soedoà voatoto? Apetraho ao anaty vilia lehibe iray ny soedoà. Fenoy rano mangatsiaka saika hanarona ireo tapa-kazo. …
Mandra-pahoviana no azonao atao ny mahandro henan-kisoa ao anaty vata tsy miadana?
Afaka mahandro henan-kisoa ela loatra ve ianao? Afaka mahandro henan-kisoa ve ianao? Sarotra ny mahandro be loatra ny soroka vita amin'ny marbra tsara sy matavy. Na izany aza, dia mety ho lasa mushy noho ny asidra ao amin'ny saosy raha mitohy ny fandrahoan-tsakafo mihoatra ny fotoana mahandro sakafo. Ataovy azo antoka ny mijery ny kisoa…
Afaka mahandro hamam-by ve ianao amin'ny 350?
Hafiriana no mahandro ham spiral amin'ny 350? Atsofohy amin'ny 350 degre F ny lafaoro. Apetraho eo amin'ny ilany ambany ny ham. Apetaho amin'ny foil ary andrahoy mandritra ny 45 minitra. Mandra-pahoviana ianao no mahandro ham amin'ny 350? Afanaina mialoha ny lafaoro hatramin'ny 350 degre F. Esory ny fonony ary kobanina…
Ny fanontanianao: Mitovy ve ny manao mofo sy mahandro?
Inona no mampitovy ny mahandro sy ny fanaovana mofo? Samy mitaky fahaizana sy fahalalana izy ireo. Samy miantso ny manapaka, manapaka, mampifangaro ary manodina. Ary samy afaka mamorona zavatra tsara hohanina. Saingy ny tena fizotran'ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanaovana mofo dia matetika tsy mitovy, teboka iray izay hazava tsara raha mamaky azy ireo ianao ...
Fa maninona ianao no tsy tokony hanao firavaka rehefa mahandro?
Afaka mahandro miaraka amin'ny firavaka ve ianao? Araka ny filazan'ny Departemantan'ny Fahasalamana sy ny Fifanampiana Idaho, "ny firavaka dia afaka manafina ny zavamiaina bitika izay mahatonga ny aretina azo avy amin'ny sakafo ary manasarotra ny manasa tanana. … Rehefa manomana sakafo dia tsy maintsy manala famantaranandro, peratra, brasele, ary firavaka hafa rehetra eo amin’ny sandry na tanana ny mpiasan’ny sakafo.” Nahoana ianao no tsy tokony…
pejy1 pejy2 ... pejy888 Manaraka →
Hey! Izaho no Samantha. Ny World of Culinary dia tontolo mahagaga sy goavana iray izay mampiray. Eto amin'ity izao tontolo izao ity dia maka antsy isika miaraka amin'ny eritreritra mamirapiratra eny an-tanantsika mba hahandro sakafo ho an'ny olon-tiana. Ary ny hanitry ny lovia tsirairay dia afaka mitondra antsika amin'ny fotoana mahafaly indrindra eo amin'ny fiainantsika. Izay rehetra tia sy te hahandro, Tonga soa!